Igebe Kubuchwepheshe Bokumaketha? | Martech Zone
Igebe Kubuchwepheshe Bokumaketha?
NgoMsombuluko, Juni 15, 2009 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Eminyakeni eminingi, eminingi edlule bengingumhlaziyi wephephandaba. Isonto ngalinye ngangihlanganisa idatha kuzo zonke izinhlelo zethu zokukhiqiza nokusabalalisa futhi ngasebenza ukuthola lapho kunesikhathi noma imali engagcinwa khona. Kwakungumsebenzi oyinselele kepha nganginobuholi obuhle futhi kule minyaka eyishumi engangisebenza lapho, sinciphisa isabelomali sethu sokusebenza unyaka nonyaka.
Kwakuwumsebenzi ovuzisa ngendlela emangalisayo. Nganginomthwalo wami uqobo wesabelomali sezigidi eziningi - ngakho-ke ukuthola imfucuza akuzange kuvumele inkampani ukuthi yonge imali, futhi kwangivumela ukuthi ngisebenzise imali lapho yayidingeka khona kakhulu. Bekugcwalisa ukuhlinzeka abasebenzi ngamathuluzi nobuchwepheshe abebudinga ukwenza izimpilo zabo zibe lula.
Ukuthola ithuba ohlelweni cishe kwakusikhokhela njalo Ukuxhumana ohlelweni, kepha hhayi kuzinqubo ezihlukile ngokwazo. Ubusuku obuningi, imishini yayisebenza kahle, imishini yokufaka yayingenasici, amaloli ayehamba kahle, futhi abathwali basebenza kanzima ukuletha iphepha emnyango wakho. Phakathi nokho, abathuthi baminyene, ulayini wehlulekile, ama-pallets awile, iloli yamaloli yehluleka, nomgwaqo wamisa abathwali.
Ngamashumi ambalwa eminyaka we marketing ukuhlaziywa manje ngemuva kwami, amathuba awazange ashintshe. Emsebenzini wami, amasayithi asebenza kahle, izincwadi zezindaba ziphuma zilungile, i- analytics kulungile, ibhulogi yenza okuhle kakhulu, izingcingo zokubizela esenzweni ziyachofozwa, futhi imikhondo iyangezwa ku-Salesforce.
Nokho, wonke amaphuzu okuxhuma phakathi kuyashoda. Iphepha lezindaba alivumelanisiwe phezulu nesayithi noma i- analytics. The analytics ukubanjwa bridge wezibalo, kepha hhayi eminye imininingwane ebalulekile evela kusayithi noma kubhulogi. Ibhulogi iheha ithrafikhi eningi, kepha ukulandelela abantu kusuka kubhulogi kuya kusayithi lenkampani kuyalahleka. Futhi ngaphakathi kweSalesforce, asiwalandeli amagama angukhiye abalethele wona, izindatshana abazifundile, noma i-CTA abayichofozile. Ukuxhumana kuphukile.
Futhi akulula ukukulungisa!
Ithimba lethu Lokumaketha liyazi ukuthi yini okudingeka yenziwe, bamane baswele izinsiza zokuyenza isebenze ngokukhululekile okwamanje. Angikholwa ukuthi lokhu kwehlukile kunoma iyiphi enye inkampani… sonke sinenkinga yokungasebenzi kahle ngenxa yokuthi amasistimu ethu ahlangana kanjani futhi asebenza kanjani. Kube yisifiso sami iminyaka eminingi, kepha anginasiqiniseko sokuthi kukhona intuthuko enkulu efike emakethe.
Njengoba ngibheke ekusaseni lobuchwepheshe bokumaketha, angikholwa ukuthi amathuba atholakala kwabanolwazi ngokwabo… ngikholwa ukuthi baxhumene nabo.
Tags: ukwenziwa kwemephuamaphuzu we-kloutukusondelana nokumaketha
I-PostPost Plugin ye-WordPress Ithuthukisiwe
Uxolo Disqus, ngingumlandeli manje!
UJun 16, 2009 ngo-12: 42 AM
Kulungile ungikhubazile, ngezibalo ezimbili. Okokuqala, kubalulekile ukubala? Kuthiwani uma wenza lokho okwenzile futhi wangakukala, ngabe kusazobala? Okwesibili, ngikhubazekile nge “Salesforce” ngakho-ke ngizoya ngithole lokho…
UJun 16, 2009 ngo-8: 52 AM
Uma singabali, sazi kanjani ukuthi umsebenzi wethu uyakhokha? Re: Salesforce - kuyisoftware njengensizakalo (online) umphathi wobudlelwano bamakhasimende (CRM). Ngokuyinhloko, ungalandelela imikhondo namakhasimende, yonke indawo yokuthinta nawo, amathuba, njll. Ngenhlangano eneminyango eminingi noma amakhasimende amaningi awukwazi ukuwakhumbula, i-CRM ibalulekile ukuze ube nawo wonke amakhasimende 'imilando kutholakale kalula.
Ngiyajabula ukuthi ubuzile! Kwesinye isikhathi ngithola ukubukeka okuhle kakhulu lapha 🙂